Dragons ao amin'ny Mythology Buddhist, ny zavakanto ary ny haisoratra
Fivavahana & Spirituality Fiaviana & Fampandrosoana
Dragons in the Buddhism
Serpents lehibe an'ny Artista sy ny haisoratra bodista
Ny Bodisma dia tonga tany Shina avy any India efa ho roa arivo taona lasa izay. Raha niely tany Sina ny Bodisma, dia nampifanaraka ny kolontsaina sinoa izany. Najanon'ny Mônkika ny fitafiana safrofana nentim-paharazana ary nanaiky ny akanjo arabo Shinoa, ohatra. Ary tany Shina, ny Bodisma dia nihaona tamin'ny dragona.
Ny Dragons dia anisan'ny kolontsaina Shinoa nandritra ny 7000 taona farafahakeliny. Ao Shina, ny dragona dia naneho ny hery, ny famoronana, ny lanitra, ary ny harem-be.
Mihevitra izy ireo fa manana fahefana amin'ny vatan'ny rano, orana, tondra-drano, ary tafiotra.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia naka ny dragona ho mariky ny fanazavana ny mpanakanto bodista. Ankehitriny dia manamboatra tafo sy vavahady tempoly ireo dragona, ary samy mpiambina ary maneho ny herin'ny fanaovan'ny dragona mazava. Ny dragona bodista matetika dia aseho amin'ny fitazonana vatomamy mani, izay maneho ny fampianaran'i Bouddha.
Dragons ao amin'ny literatiora Chan (Zen)
Tamin'ny taonjato faha-6, nanjaka tany Chine (Zen) ny sekoly Bodista. Nokolokoloina tamin'ny kolontsaina Shinà i Chan, ary ny dragona dia matetika hita ao amin'ny literatiora Chan. Ny dragona dia mitana andraikitra maro - ho mariky ny fahazavana ary koa ho marika ho an'ny tenantsika. Ohatra, ny "fihaonana ilay dragona ao anaty lava-bato" dia teny fampitahana mba hiatrehana ny tahotra sy ny vato misakana lalina indrindra.
Ary avy eo dia misy ny tantaran'ny Sinoa an'ny "dragona marina", izay noraisina ho fanoharana nataon'ireo mpampianatra tsy tambo isaina.
Ity ny tantara:
Yeh Kung-tzu dia lehilahy tia dragon. Nianatra ny dragona izy ary nandravaka ny tranony tamin'ny sary hosodoko sy sarivongana. Niresaka momba ny dragona ho an'ireo izay mihaino izy.
Indray andro dia nisy dragona naheno an'i Yeh Kung-tzu ary nieritreritra, tena mahafinaritra tokoa io lehilahy io mankasitraka antsika. Azo antoka fa nahafaly azy ny nihaona dragona iray tena izy.
Ilay dragona tamin-katsaram-panahy dia nanidina nankany amin'ny tranon'ny Yeh Kung-tzu ary niditra tao anatiny, mba hitadiavana an'i Yeh Kung-tzu matory. Avy eo dia nifoha i Yeh Kung-tzu ary nahita ilay dragona nopotehina teo am-pandriany, ny kirany sy ny nify nipitipitika tamin'ny volana. Ary Yeh Kung-tzu nihiaka tamim-pihorohoroana.
Talohan'ny hamoahan'ilay dragona ny tenany, dia naka sabatra i Yeh Kung-tzu ary niongotra tamin'ny dragona. Nidina ny dragona.
Taranaka maro avy amin'ireo mpampianatra Chan sy Zen, anisan'izany i Dogen , no nanonona ny tantaran'ny dragona marina tamin'ny fampianarany. Ohatra, nanoratra tao amin'ny Funkanzazengi i Dogen, "Miangavy anareo aho, ry namako mendri-piderana amin'ny fianarana amin'ny traikefa, aza lasa zatra sary izay atahoran'ny dragona marina ianareo."
Amin'ny maha-fanoharana azy dia azo lazaina amin'ny fomba maro ny tantara. Mety ho fanoharana ho an'ny olona iray manana fahalianana ara-tsaina amin'ny Bodisma ary mamaky boky marobe momba izany, saingy tsy mahatsapa fa mila fanazaran-tena , mitady mpampianatra , na mandray ny trano fialofana . Ny olona toy izany dia maniry ny karazana Bodoy faux ho an'ny tena izy. Na, mety hidika izany hoe matahotra sao hiala amin'ny tenanao mba hahatakarana ny fahazavana.
Nagas sy Dragons
Nagas dia bibilava mitovy endrika ao amin'ny Canon Pali . Indraindray izy ireo dia antsoina hoe dragona, saingy samy manana ny fiaviany izy ireo.
Naga ny teny Sanskrit ho an'ny cobra. Ao amin'ny zavakanto fahiny fahiny, ny nagas dia aseho amin'ny maha olona avy amin'ny tandroka ary mihintsana avy amin'ny tendany. Indraindray dia miseho tahaka ny kôbrà goavam-be izy ireo. Amin'ny literatiora hindoa sy bodista sasany, afaka miova endrika avy amin'ny olombelona ho bibilava izy ireo.
Ao amin'ny Mahabharata , tononkalo hindu epis, nagas dia aseho ho zavaboary be dia be manery ny hanisy ratsy ny hafa. Ao amin'ny tononkalo, ny fahavalon'ny nagas dia i Garuda, ilay voromahery lehibe.
Ao amin'ny Canon Pali, ny nagas dia miombom-pihetseham-po kokoa, saingy mitoetra mandrakizay amin'ny ady amin'ny garudas izy ireo , afa-tsy ny fanenjehana fohy ataon'ny Bouddha. Rehefa nandeha ny fotoana, dia naseho ho mpitaiza ny Tendrombohitra Meru sy ny Bouddha koa ny nagas. Ny Nagas dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny angano Mahayana ho mpiaro ny sutras. Azonao atao ny mahita sarin'ny Bouddha na olon-tokana hafa mipetraka eo ambanin'ny saron-doha amin'ny kapa lehibe iray; Izany dia naga.
Rehefa niely nanerana an'i Shina ny Boddisma ary tany Japon sy Korea dia nanjary fantatra fa draga karazana ny nagas. Ny tantara sasany nambara tany Chine sy Japana momba ny dragona dia avy amin'ny tantara momba ny nagas.
Ao amin'ny angano Boddiana Tibetana anefa dia dragona sy nagas no zavaboary samy hafa. Ao Tibet, ny nagas dia matetika mahasolafaka ny fanahin'ny rano izay miteraka aretina sy tsy fahampiana. Saingy ny dragona Tibetana dia mpiaro ny Bodisma, ka ny feo kotrokorana dia mamoha antsika amin'ny fanaratsiana.
9 Boky Taoisma Great For Beginners
Ny fahamarinana voalohany voalohany
Ny Talata Jataka
Ahoana no hamelana heloka?
Feon'ny fieritreretana avy amin'ny lalana Bodista Bodista
Fampidirana ny sambo mpitantana
Ireo olon'ny Fiangonana Kristiana tany am-piandohana
Ny paroasin'i Bouddha
Ireo gymnasts vehivavy miaraka amin'ny medaly manerantany
Venus any Aries Women
Adiresin'ny Colorado State University
Ny hery manasitran'ny saina sy ny maso
Toe Hang: Inona izany ary inona no ambarany aminao momba ny mpandefa
Ny Tantaran'ny Krismasy momba ny Magy (Magi) sy ny Dream iray mahagaga
Nokian Hakkapeliitta 7 Noporofoin'ny Tiro Review
Ny fomba tsotra indrindra hahatsiarovana iza no andoavam-bola
Azo atao ve ny miaro ny vehivavy bevohoka?
Nahoana no manaraka ny làlan-dàlana ny làlana?
Inona no atao rehefa mandrehitra ny jiron'ny jirony ny jirony?
Virjiny sy Sagittarius fitiavana fifanarahana
Lehiben'ny Wymering: Trano fandraisam-bahiny britanika any Grande-Bretagne
Ahoana ny fomba hanoratana tononkalo diamante
Ny tranga tsy voavaha ao amin'ny ankizy mpamono ankizy ao Oakland
Hira Breziliana malaza
Tantara Ejipsianina fahiny: Mastabas, Piramidana Ory
Rhetorique: Famaritana sy fandinihana
59 Teny Espaniola Manahaka Ny Fiainana Amin'ny Teny Onomatopoeic
Saturn ao amin'ny trano fahafito
Ny famonoana ho an'ny fianakavian'i Jennifer Hudson
Ny fahasamihafana eo amin'ny indexes sy ny mizana